DAAWO: DF- Soomaaliya oo Shaacisay Magacyada iyo Sawiradda Ragii Fuliyey Qaraxii Zoope iyo Kuwii Qaybta ka ahaa | Kalshaale
DAAWO: DF- Soomaaliya oo Shaacisay Magacyada iyo Sawiradda Ragii Fuliyey Qaraxii Zoope iyo Kuwii Qaybta ka ahaa
Nov 15, 2017 - 5 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Dawladda Soomaaliya oo mudooyinkii ugu dambeeyay Baadhitaan iyo Hubin ku waday Shaqsiyaadka oo Qabtay Qaraxii Soobe ayaa soo bandhigtay dadkii Fuliyey iyo Kuwii qaybta ka ahaa Weerarkaasi uu dhiiga badan ku daatay.
Qaraxii Zoobe ayaa ahaa midkii ugu dhimasada Badnaa ee ka dhacay Soomaaliya, waxaana ku Nafwaayey dad lagu qiyaasay 400-Qof , iyadoo in badan oo kalana ay ku dhaawacmeen.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Eng. C.raxmaan Cumar Yariisow ayaa shaacisay magacyada iyo Sawirada Shaqsiyaadka loo qabtay falkii Qaraxa 14-ka October waxayna kala yihiin. HOOS KA AKHRISO/DAAWO.
Gaariga TM ka drawalka waday oo isku qarxiyey waa Maadey (Cismaan Xaaji).
Asc aniga caad igama Sarna hormuud inay shabab tahay lkn dahabshiil Maxaa loogarebay A yada maalgalisa df waxan kacodsaneyna inay albabada ulaabto labadan shirkadod maamulaysha soorixrirto
Hadhowbeey qabiil noqon donaan
Somalidu waa nabad doon waana nabad diid waa niman dhulkoodi gubaya wadama aysan lahayna bada isugu gurayan naftooda halagaya ragga umada saa u halaagaya guryo bay kasoo tosayaan laguna ogyahay marka madax wayne iyo raisulwasare waxba ma qaban karaan intaay shacabku saas u qarsanayaan duliga umada dhamaynaaya
somali wagii ay dawladi ka adkayd waa markay re miyiga wada ahaayen ee aysan hub gacanta u galin balada qaraxda inta hoosta lagu haysto walle madax wayne kan ugu fiican hadi naloo dooro xitaa inaanu nabad helayn!
Waa rubntaa ayagoo nabadqabo ayay ku noqonayaan gurigii ayka soo tooseen
Waa run madaxweyne iyo raisulwasare
Ma guryaha ayay midmid ubaarikaraan?
Jawaabtu waa maya marka shacabka intey qarqarinayaan dhibkan wuu socon
Illaahay faraj kheyrqabo hafuro
amaal hormuud shabab shaqo kuma laha ha ku danbabin hormuud wa shirkad dadka masakiinta caawisa markii la xirayna wa lagu qaldamay oo been ayay ahed marka shirkada inay alshaydaan shaqo ku ledahay ila aha
Kuligood wajiyadooda waxaa ka muuqda in eey ahaayeen balwadiistayaal, nolosha ka dhacay, iyo mooryaantii hore ee shalay, oo mental ilness, madaxa ka waashay.
Waxaa kaloo run ah, sida aqyaarta kore sheegeen, in daanyeeradaan eey gurya kasoo toosaan, guryana lag qariyo, iyaga oo daanyeeeerada waalidkood, iyo asxaabtooda iyo ehelkooda, eey amaba la shaqeeyaan, oo eey ogyahiin, amaba eey dayaceen waajibka saarnaa.
More immportantly, tan ugu muhiimsan ayaa waxeey tahay, karti xumada, daanyeernimada, caqli yarrinimada dadka dowladda dhexe kabuuxa, midka ugu hooseeysa iyo midka ugu sareeya, oo ku guuldareeystay, in eey maskaxdooda xunta ah ka keenaan, “solution” xal, kaas oo aan anniga aaminsanyahay in uu yahay mid ciidan, milatari, iyo hal wasaarad kaliya, oo dowlad kusheegta dhexe oo dhan, eey xooga iskugu geeyso, oo ah, wasaaradda gaashaandhiga.
Inta qaab darradaas oo kale socota, dadka dadka ugu liitana eey doonayaan in eey dadka hogaamiyaan, oo xafiisyada dowladda dhexe eey ka buuxaan, wax nolol iyo nabad oo eey helayaan dadka Somaliyeed, qaasatan Koonfurta Somaliya majirri doonta.
Mushkilada argagixisda ee Xamar kasocota, waa mid eey kusimmeen qabqablayaashii dagaalka ee Xamar, oo eey ku wareejiyeen. Dad abaabulan ayaana ka shaqeeya in marka hal jid, iyo hal xeelad lagu baabi’iyo dadkaan, mid kale, loogu sii gudbiyo. Iyagana, waa daanyeero oo waa garan la’yahiin, ilaa iyo maantay.